Fanatsarana ny fitaterana :: Azo hatao ny mamandrika taksiborosy amin’ny tranonkala • AoRaha
Fanatsarana ny fitaterana Azo hatao ny mamandrika taksiborosy amin’ny tranonkala
Natao hanala fahasahiranana amin’ireo mpanjifa ny taksiborosy no namoronana ny kajimirindra amin’ny finday mba hahafahana mamandrika toerana iray amin’ny kaoperativam-pitaterana. “Azon’ny mpandeha atao ny mijery hatrany an’ireo fiara mbola afaka mitondra amin’ny fotoana tiany hanaovana famandrihana sy amin’ny daty hiaingany. Ankoatran’izay, afaka misafidy ny toerana tiany hipetrahana mandritra ny dia izy ireo. Aloan’ny mpanjifa amin’ny alalan’ny finday ny saran-dalana ka mitondra fanamarinana fotsiny izy amin’ny andro handehanany”, hoy i Mahasaina Landry , nanganana an’ilay kajimirindra antsoina hoe “lemuriia”, omaly.
Mbola kaoperativa iray ihany anefa no ao anatin’io vondrona io, araka ny fanampim-panazavan’ny mpamorona azy . Efa amperin’asa kosa anefa na mbola vitsy aza ny olona mahalala ny fisiany. “Ny taksiborosy miasa eto Antananarivo mitatitra mankany Toamasina ihany aloha no miara-miasa aminay. Hisy kosa ny fampahafantarana aorian’izay sy ny fisokafana amin’ny kaoperativa sy lalan-jotra hafa” , raha ny voalazan’i Mahasaina Landry. Mila fahafahana mifandray amin’ny aterineto ny fampiasana an’io kajimirindra io saingy amin’ny sarany mora satria tsy mandany fotoana ny fanaovana ny famandrihan-toerana.
Taorian’ ny fifaninanana natokana ho an’ireo mpanangana orinasa nataon’ny tambazotram-pifandrasana iray no nahafahan’izy ireo nanangana an’ity kajimirindra ity satria nanao fanadihadiana nandritra ny fotoana lava teny amin’ ireo toby fiantsonana misy eto Antananarivo izy ireo.
Fanamafisana ny hery fiarovana Azo iverenana sotroina ny tambavy CVO
Fanjifana herinaratra sy trano Azo aloa tsikelikely ny faktioran’ ny Jirama volana jona
Fidirana amin’ny sekoly ambony
Fiparitahan’ny valanaretina :: Manao fitiliana maro mikasika ny pesta ny “Institut Pasteur de Madagascar”